Fihaonana eo Ambony Fihaonana eo ny Zokiolona
NAHOANA ny FIHAONANA EO amin’ny olom-pirenena: inona no zavatra tena mametraka antsika ankoatra ny hafa mampiaraka toerana? Fihaonana Eo Ambony miavaka eo amin’ny ny rafitry ny fivoriana, ary mamela anao mba tsy hihaona traikefa nahafinaritra, fa koa mba hahatonga anao ho namana (e) s. Noho ny Fitiavana lehibe tantara efa nanomboka tamin’ny tsara tarehy tantara ny Finamanana!’ IANAO dia AFAKA: — Jereo ny mombamomba ny ankizilahy na ankizivavy, fa koa toy izany koa ny firaisana ara-nofo.
Eo Ambony ny olom-pirenena nitatra ny fivelarana, ary koa mamela anao hanao fivoriana ao amin’ny Vondrona Eoropeana — Te-hanao dia lavitra, fa tsy ny antony manosika hanao izany irery (e)? Mahita ny olona iray izay dia mizara mitovy ny Tombontsoa ho anao! MAMORONA NY BILAOGY: afaka Hitantana ny dokam-barotra, hizara ny firehetam-po amin’ny alalan’ny famoronana ny blaogy! Fihaonana Eo Ambony mandeha lavidavitra kokoa! Izany mamela anao hampitombo ny sehatra, mamela anao haneho ny tenanao mihoatra noho tsotra ny ‘MOMBA AHY’! — Hanoratra ny afa-po ny firehetam-po teo aloha: ny diany, Ny famoronany, ny fivoahana. Mampifandray ny afa-po ny sary tsy miankina, ny IRAY (S) ny NAMANAO (S) mety manontany, na manao izany ny VAHOAKA sy misafidy ny hizara izany amin’ny mpikambana rehetra. Tsy miraharaha izany fitaovana mahery vaika — amin’ny fanoratana bilaogy iray miforona eo amin’ny ny mombamomba azy sy ny mety tena hampitombo be ny tombontsoan ny fahombiazana. Ny bilaogy dia mamela anao mba hihazonana ny fifandraisana am-pirahalahiana, fa koa mamela ny fifandraisana mba hahita ‘NY tontolo IAINANA’. Ny tontolo iainana amin’ny alalan’ny izay, ny HATSARANY noho izany dia mamela anao mba hanambara ny ampahany amin’ny ‘ny zava-miafina Zaridaina’. Ireo mpikambana hafa dia afaka namaky ny asa soratr ny bilaogy sy handray anjara amin’ny fanehoan-kevitra, na maneho ny heviny manokana momba ny foto-kevitra, ka nahatonga matetika mafana ny adihevitra. Izany dia ny mini forum izay tsy maintsy tanteraka ny fanaraha-maso ny lohahevitra, anisan’izany ny antonony, hamonoany ny fanehoan-kevitra tsy mendrika. Ny FIVORIANA EO amin’ny olom-pirenena, raha ny MARINA AZA dia HO ANAREO: Mifandray tsy fahalalana onony sy mizara ny sary amin’ny alalan’ny CHAT feno sy intuitive! — Mamorona anao manokana SALONS, ihany voatokana ho an’ny VONDRONA namana (e) s.
Mizara ny sary sy ny hiresaka tsy misy fetra
Mamorona sy ny mandefa ny filazana mba handefa ny mifandray mpikambana na araka ny lisitra izay efa voafaritra teo aloha! Ny MPITANDRO ny: Dia atao koa, fa ianao dia afaka hankafy tanteraka ny traikefa eo amin’ny toerana Fivoriana Eo Ambony. Izany no mahatonga antsika manana fitsipi-pitondrantena sy mamporisika ny rehetra ny mpikambana ao amintsika mba hanaja izany.
Fihaonana Eo Zokiolona Manome ny tontolo azo antoka sy TONY fihetsika ho velona
Isaky ny fisoratana anarana dia kery araka ny ekipa alohan’ny idirana an-tserasera! Toy izany koa ny sary, ny bolongana, ny fanehoan-kevitra. ‘
← Mafana ny zaza menavava: Mahita mafana ny tovovavy amin'ny toerana fiarahana
Hiresaka amin'ny ankizivavy Cr ankizivavy →